Vaovao - Ahoana ny fisafidianana fitaovana plugging biolojika azo ovaina?
Ahoana ny fomba hisafidianana fitaovana plugging organika azo ovaina tsara?
1. Inona no tsy maintsy dinihina rehefa mividy fitaovana plugging plastika malemy paika amin'ny Internet? Ahoana ny fomba hanaovana safidy tsara?
Ny fividianana an-tserasera fitaovana fametahana voajanahary azo ovaina dia midika fa novidina tamin'ny tranokala indostrialy ilay vokatra. Noho izany, misy ny fiheverana na ny lafiny ilaina izay tokony hodinihina. Ankoatr'izay, raha misy ifandraisany amin'ny fividianana ny vokatra dia fiheverana lehibe sy ilaina izany, izay tsy maintsy ifantohana. Noho izany dia ilaina ny mandinika ireo anton-javatra, toy ny niandohan'ny vokatra, ny pitsopitsony ary ny maodely, ny habeny, ny masontsivana, ny kalitaon'ny vokatra ary ny vidiny, ary koa ny mpanamboatra.
Raha te hanana safidy tsara ianao dia mila manao ireto hevitra roa manaraka ireto: voalohany, mila manao asa fanomanana alohan'ny hividianana vokatra ianao, mba hahafantaranao izay fantatrao; faharoa, rehefa mividy vokatra dia tokony ho dinihinao avokoa ireo lafin-javatra rehetra mifandraika amin'izany, ary tokony hanana fandinihana feno ianao mba hahafahanao manana fitsarana marina. Ireo teboka roa etsy ambony dia azo tanterahina.
2. Mila fanamarinana kely ve ireo mpanamboatra akora plugging organika miovaova?
Ireo mpanamboatra akora plugging biolojika malefaka dia mila manatanteraka asa fanamarinana, satria ity asa ity dia mety hitondra tombony sasany, toy ny fanatsarana ny fifaninan'ny mpamokatra sy ny vokatra vokariny eny an-tsena, ary ny fanatsarana ny tombony ara-toekaren'ireo mpanamboatra. Noho izany dia ilaina ny mandray am-pahamatorana an'io asa io. Ankoatr'izay, misy lafiny roa tafiditra amin'ny fitantanana kalitao.
3. Inona avy ireo fepetra takiana manokana sy ilaina amin'ny fitaovana plugging plastika miovaova?
Fitaovana plugging biolojika azo ovaina, izay misy fepetra takiana manokana sy fototra amin'ny vokatra, dia: fanjifana angovo fampiasa amin'ny fitaovana, modely sy famaritana isan-karazany, vola lany amin'ny rafitra, fitaovana marobe tokony haroso. Raha ny maody fandidiana dia azo ampiasaina tsy tapaka na miadana izy io, ary ambany ny vidin'ny fandidiana ary tsotra sy mora ny fandidiana. Amin'ny fampiharana, ity karazana fitaovana fanaovana plugging ity dia azo ampiasaina amin'ny sehatra maro. Ho an'ireo mpanamboatra azy, ny kalitaon'ny vokatra dia azo antoka ary ny vokatra azo amboarina araka ny takiana.